The Ab Presents Nepal » काठमाण्डौका यी मनकारी घरधनी जसले कोरोनासँग ल,ड्न क्वा,रेन्टाइनको लागि आफ्नो घर नि:शुल्क दिदैंछन, मनका धनि सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस!
काठमाण्डौका यी मनकारी घरधनी जसले कोरोनासँग ल,ड्न क्वा,रेन्टाइनको लागि आफ्नो घर नि:शुल्क दिदैंछन, मनका धनि सम्मान स्वरुप शेयर गर्नुहोस!
काठमाडौं -: विश्वमा कोरोना भा,इरस को त्रा,स फैलिरहेको बेलामा नेपालमा पनि स,जगता अपनाइएको छ । नेपालमा अहिले सम्म कोरोनाको सं,क्रमण नदेखिएपनि भि,त्रिन नदिन सा,वधानी अपनाइएको छ । सरकारले औषधी र अ,स्पतालको ब्यवस्था गरेको जनाएको छ ।सरकारलाई कोरोना विरु,द्ध स,जगता अ,पनाउन स,हयोग गर्दै स्थानिय त,वरवाट पनि आ,ह्रवान हुन थालेको छ । काठमाडौंमा हुन सक्ने कोरोनाको सं,क्रमणवाट बचाउन काठमाडौंका २ जना घरधनीहरुले आफुहरुको घरलाई नै क्वा,रेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई आ,ह्रवान गरेका छन् ।
कोरोना वि,रुद्धको ल,डाई सरकारको मात्र नभएर सर्वसाधारणको पनि दा,यित्व भन्दै उनीहरुले आफ्ना घरलाई क्वा,रेन्टाइनक रुपमा प्रयोग गर्न आ,ह्रवान गरेका हुन् । कोरोनाको आ,शंका गरिएका ब्यक्तिलाई १४ दिन सम्म राख्न आफ्ना आलिशान भवनलाई क्वा,रेन्टाइनका रुपमा प्रयोग गर्न आ,ह्वान गरेका छन् ।काठमाडौं सि,फलका चि,राग गोयल र कु,लेश्वरका लाल चन्द्र गौतमले यस्तो आ,ह्वान गरेका हुन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा आफ्ना ति घर सार्वजनिक गर्दै क्वा,रेन्टायनमा बस्न निशुल्क रुपमा उ,पलब्ध गराउने बताएका छन् । आ,लिशान देखिने ति घर सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
काठमाडौंको सिफल स्थित आफनो आ,लिशान घर देखाउँदै चि,राग गोयलले फेसवुकमा लेखेका छन्,यो सिफल, काठमाडौंमा रहेको हामो खाली घर हो । एक विदेशीले काठमाडौंमा एक्लै बस्नको लागि ठाउँ खोजिरहेको र होटलमा बस्न नसक्ने अवस्थामा रहेको पोस्ट देखे,त्यसैले हामीले हाम्रो घरलाई १४ दिनको क्वारेन्टाइन अवधिको लागि निःशुल्क रहन (बस्न) दिने नि,र्णय लिएका छौं ।
गोयलले आफ्नो घरमा ९ वटा कोठा रहेको र २ वटा छतहरुलाई पनि कोठा बनाउन सकिने पनि उल्लेख गरेका छन् । उनले कोरोना भा,इरससँग ल,ड्न सरकारले सबैलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएकाले आफूहरुले स,हयोग गर्न लागेको बताएका छन् । उनले अझै अगाडी बढेर भनेका छन् कोरोनासंग जु,ध्नका लागि सरकारले चाहे आफ्नो खाली घरलाई अस्थायी अ,स्पताल बनाउन चाहे पनि उपलब्ध गराउन चाहन्छु ।
यस्तै काठमाडौंकै अर्का घरधनी लालचन्द्र गौतमले पनि आफ्नो कुलेश्वरमा रहेको आफ्नो खाली घरलाई पनि क्वारेन्टायनका लागि प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् । वि,क्रीका लागि राखेको घर अहिले खाली छ । त्यसैले त्यो घर पनि क्वारेन्टाइनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने घो,षणा गरेका छन् ।गौतमले आफ्नो घरमा ३ वटा फ्लोरमा २ वटा वेडरुम सहितको कोठा, २ वटा किचेन र २ वटा लिभिङ रुम रहेको उल्लेख गरेका छन् ।मलाई थाहा छ नेपाल सरकारले रातारात नयाँ अ,स्पताल बनाउन सक्दैन, त्यसैले म आफ्नो घर अस्थायी अ,स्पतालको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन चाहन्छु,गौतमले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्,यो घर हामी कोरोना भाइरस मुक्त नेपाल भए पछि मात्र बि,क्री गर्ने छौं । ताजाखबरबाट